Templelọ nke nnapụta ụwa niile (Guangji Si 广济寺) - WRSP
Templelọ nke nnapụta ụwa niile (Guangji Si 广济寺)
ỤLỌ NCHE ỌGWỤGWỤ ỌGWỤGWỌ
12th narị afọ: E hiwere ụlọ nsọ maka West Liu Village (Xi Liu Cun Si 西 刘 村 寺) na ihe bụ Beijing ugbu a na saịtị nke ụlọ nsọ nke nzọpụta ụwa mgbe e mesịrị.
14th narị afọ: A gbanwere ụlọ nsọ ahụ ụlọ nsọ Bao'en Hongji (报 恩洪 济). Ka ọ na -erule ngwụsị narị afọ, e bibiri ya n'oge agha ndị agha na mpaghara.
1466: Site na nkwado alaeze ukwu, e wughachiri ụlọ nsọ na mkpọmkpọ ebe ụlọ nsọ Bao'en Hongji. Eze ukwu ahụ kpọrọ ụlọ nsọ ahụ "Spreading Compassion Temple of Universal Rescue."
1678: Ewubere ikpo okwu na -acha ọcha mabul n'ụlọ nsọ.
1912: Sun Yatsen, onye isi ala nke Republic of China, steeti izizi nke mba a, kwuru okwu n'ụlọ nsọ.
1931: Ejiri ọkụ bibie ụlọ nsọ ahụ n'oge emume iji chekwa ma chekwa mba ahụ.
1935: E wughachiri ụlọ nsọ ahụ n'ụdị usoro eze Ming, malite na mgbe mbụ ọ nwetara nkwado eze.
1953: Mgbe ọ dabara na ndị uwe ojii na ndị agha, yana nhụjuanya site na agha obodo China, emepegharịrị ụlọ nsọ ahụ n'okpuru nkwado nke ọchịchị Kọmunist ọhụrụ wee mee isi ụlọ ọrụ nke ndị otu Buddhist China (Zhongguo Fojiao Xiehui 中国 佛教 协会; BAC) , ụlọ ọrụ gọọmentị nyere ikike. Templelọ nsọ rụrụ ọrụ dị mkpa na nnọchi anya ndị ọbịa nke ndị Buddha na -eleta si mba Asia ndị ọzọ. Agbanyeghị, e megheghị ya ọha.
1966: Site na mmalite nke Great Proletarian Cultural Revolution, ụlọ nsọ kwụsịrị imeju ọrụ ọ bụla ma mechie BAC. N'ịbụ onye e boro ebubo na ọ na -ebibi ihe niile fọdụrụ na omenala '' feudal '' nke China, ìgwè ndị nche Red wakporo ụlọ nsọ ahụ, mana ọ lanarịrị nke ukwuu n'enweghị nsogbu.
1972: Premier Zhou Enlai nyere iwu ka eweghachi ụlọ nsọ na nwughari nke BAC.
1980: BAC gbakọrọ ọzọ n'ụlọ nsọ maka oge mbụ kemgbe Mgbanwe Ọdịbendị, ụlọ nsọ ahụ maliteghachiri ọrụ okpukpe na nke gọọmentị.
1980s (Mbubreyo): N'isochi mmachi nke nwayọ nwayọ, ụlọ nsọ mepere ọha mmadụ n'oge awa ehihie na ihe omume ime mmụọ bidoro na nke mbụ n'ime akụkọ PRC.
1990s (etiti): Okpukpe Buddha malitere itolite na ogige ụlọ nsọ dị na nsọtụ, nke dị na mgbago mgbago nke ụlọ nsọ ahụ, na -enwe ọmarịcha ọnọdụ okpukpe ọha na eze, gụnyere ndị na -ekwusa ozizi amateur na ịkekọrịta na mkparịta ụka nke akwụkwọ Buddha a ma ama. Ndị mọnk nke ụlọ nsọ hiwekwara “nkuzi nkuzi banyere akwụkwọ nsọ” n'efu, izu abụọ kwa izu iji kuziere ndị nkịtị na ndị ọbịa ndị ọzọ nwere mmasị na nkuzi Buddha.
2006: Akpọrọ ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa niile ka ọ bụrụ saịtị dị mkpa maka nchekwa nke ọdịnala ọdịnaala.
2008: Templelọ nsọ nyere ihe karịrị RMB ¥ 900,000 (US $ 150,000) iji rụzigharịa ụlọ akwụkwọ elementrị na mpaghara Gansu nke ala ọma jijiji Wenchuan mebiri.
2010s (Etiti): Ndị isi ụlọ nsọ weghaara okwu ihu ọha na ihe ndị ọzọ a na -ekesa n'ogige dị na mpụga, bụ nke kwụsịrị ịrụ ọrụ dị ka oghere okpukpe na obodo.
2018: Ọrụ nrụzigharị dị ukwuu weere ọnọdụ n'ụlọ nsọ n'okpuru usoro nchekwa ọdịbendị ọdịbendị.
Amabeghị ihe gbasara ụlọ nsọ West Liu Village mbụ e wuru na saịtị ahụ na Bejing ugbu a. Ụlọ nsọ nke mgbapụta ụwa mgbe e mesịrị, nke e wuru na narị afọ nke iri na ise, bụ mbọ nke otu ndị mọnk na -arụsi ọrụ ike sitere na mpaghara Shanxi bụ ndị chọpụtarala mkpọmkpọ ebe nke ụlọ nsọ gara aga bibiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị afọ gara aga wee kwe nkwa ịmaliteghachi ya. Nkwado maka iwughachi ihe a sitere n'aka onye na -elekọta obí eze aha ya bụ Liao Ping (廖 屏), onye mechara rịọ eze ukwu Ming Xianzong arịrịọ nke ọma ka o nye aha ụlọ nsọ ahụ.
Templelọ nsọ rụrụ ọrụ dị mkpa n'ọgbọ nke ụlọ akwụkwọ Lü Zong, otu n'ime ụlọ akwụkwọ etiti asatọ nke Buddha Mahayana. Ụlọ akwụkwọ Lü Zong na -ekwusi ike na ịgbaso iwu ndị mọnk (Vinaya) (Li na Bjork 2020: 93). Ka oge na -aga, ụlọ nsọ ahụ ghọrọ ebe dị mkpa maka echichi ndị mọnk ọhụrụ.
Ọnụ ọgụgụ ndị mọnk bi n'ụlọ nsọ agbanweela kemgbe ụwa, na oge ebe a gbahapụrụ ebe obibi ndị mọnk kpamkpam mgbe ọkụ gasịrị ma ọ bụ itinye ụlọ nsọ maka ọrụ ụwa. N'ime oge mgbanwe mgbanwe ọdịbendị, n'etiti ndị mọnk iri na ise na iri abụọ na ise ebirila na-ebi n'ụlọ nsọ kwesịrị ekwesị, ya na ndị isi ndị mọnk ndị ọzọ nke BAC na-ebi n'akụkụ ugwu nke ụlọ nsọ ahụ mgbe ụfọdụ.
Ndị na -eme ụlọ nsọ ahụ na -agbaso nkuzi Siddhartha Gautama, onye isi alaeze Sákya nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ India nke nwere ike biri n'ihe dị ka narị afọ nke ise ruo nke anọ TOA. Dị ka akụkụ Akwụkwọ Nsọ Buddha siri kwuo, Siddhartha hapụrụ ọkwa ya dị ka onye isi na onye ga-abụ eze ibi ndụ okirikiri dị ka onye na-ajụ ajụ na onye nkuzi. Ndị na -eso ụzọ ya kwenyere na ọ nwetala edemede na ntọhapụ ikpeazụ site na nhụjuanya ụwa, na -eme ya "Buddha" ma ọ bụ onye nwere nghọta. Siddhartha tọrọ ntọala monastic kacha ochie n'ụwa nke ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke chọrọ ịgbaso ihe nlereanya ya. Ndị ọzọ na -eso ụzọ Buddha gụnyere ndị nkịtị (ma ọ bụ ndị na -arụ ọrụ nkịtị) ndị na -eme nkuzi Buddha mana ha na -anọ n'ime ọha mmadụ na -esonyeghị n'usoro ndị mọnk. Ndị na -arụ ọrụ nkịtị na -arụkarị ọrụ dị ka ndị na -elekọta anụ arụ, na -enye ha nri, uwe, na ebe obibi na -enwe olileanya na ha ga -enweta uru zuru oke ịlọ ụwa ọzọ dị ka ndị mọnk n'onwe ha n'oge ndụ. N'oge a, ndị nkịtị na -enwewanye nchegbu maka inweta mmụọ n'oge ndụ ha ugbu a, n'agbanyeghị na ọrụ ha dị ka ndị na -akwado monastics ka dị mkpa.
Dị ka ọtụtụ ụlọ nsọ Han nke China, ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa bụ nke Mahayana Buddha (na Chinese Dacheng Fojiao 大乘 佛教), otu n'ime “ụgbọ ala” atọ nke nkuzi Buddha, nke a na -ahụkarị na mba East Asia. Okpukpe Mahayana dabere na ezigbo bodhisattvas, onye kwere nkwa na ha agaghị enweta edemede ikpeazụ ruo mgbe ha zọpụtara ihe ndị ọzọ niile na -ata ahụhụ.
Ọ bụghị ndị niile na -abịa n'ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa niile na -agbaso ụzọ okpukpe Buddha. Ọtụtụ oge n'akụkọ ihe mere eme ya, gụnyere nke ugbu a, ụlọ nsọ arụkwaala ọrụ dị ka ebe ofufe ofufe nke ndị na-efe ofufe na-akpọ isiala na, mgbe ụfọdụ, na-achụ àjà n'ihu ihe oyiyi buddha na bodhisattvas n'ime ụlọ nsọ ahụ, na-emeso ha dị ka chi nwere anwansi. ike. Ọtụtụ n'ime ndị na -efe ofufe a na -achọ ngọzi nke ezi ahụike, ogologo ndụ, ịba ọgaranya, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na -echegbu ụwa. Ọ bụ ezie na okpukpe Buddha nke ọdịnala na -adabere na nkwenkwe na omume mmadụ na -eme ugbu a na -ekpebi ihe ga -eme n'ọdịnihu, gụnyere ịlọ ụwa ọzọ, ọ dịla anya ọ bụ omenala n'ọtụtụ mba ndị Buddha maka ndị nkịtị na ndị na -efe ofufe ịchọ enyemaka nke ndị mọnk n'ịme emume maka ndị ha hụrụ n'anya nwụrụ anwụ. iji hụ na ndị anyị hụrụ n'anya na -aga n'ihu n'enweghị nsogbu maka ịlọ ụwa ọzọ. China abụghị ihe dị iche na nke a, ndị mọnk nọ n'ụlọ nsọ nke Universal Rescue na -eme emume mgbe ụfọdụ maka nnapụta ziri ezi nke "mkpụrụ obi" mmadụ maka ịlọ ụwa ya n'ọdịnihu (chaodu 超度). Agbanyeghị, dị ka ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa niile bụ isi ụlọ ọrụ nke ndị otu Buddhist nke China, ndị mọnk ụlọ nsọ hụrụ na ọ dị mkpa ijigide orthodoxy, mmadụ na-ahụkwa ihe atụ ole na ole nke mmemme ịkwụ ụgwọ ọrụ dị ka emume mgbapụta karịa n'ụlọ nsọ ndị Buddha n'ebe ndị ọzọ. China.
Echichi nke ndị mọnk ọhụrụ abụrụla ọrụ dị mkpa nke Templelọ nke Nzọpụta ụwa ebe ọ bụ na e wuru usoro nhazi ya na usoro eze Qing mbụ. Tụkwasị na nke a, n'afọ ndị na -adịbeghị anya, a hụla mmemme ntụgharị afọ abụọ kwa afọ, yana ọtụtụ narị ndị sonyere n'otu oge. [Foto dị n'aka nri] Na mgbakwunye na ndị a, ndị mọnk nke ụlọ nsọ na -edu ndị nkịtị na ndị ọbịa ndị ọzọ na nzukọ Dharma kwa izu (fahui 法 会) na emume nsọ nke a na -akpọ Chanting of Sutras (songjing 诵经; Leekwa, Gildow 2014). Nzukọ Dharma na-ewere ọnọdụ na nke mbụ, nke asatọ, nke iri na ise, na ụbọchị iri abụọ na atọ nke ọnwa ọnwa. N'oge dị iche iche n'ime afọ, a na -enwe mgbakọ pụrụ iche na -eme ememme ndị ọzọ na okwuchukwu mgbe ụfọdụ. Nke kacha wee pụta bụ emume ncheta ọmụmụ Buddha (yufo jie 浴佛 节); ụbọchị ọmụmụ, ụbọchị ntụgharị, na ụbọchị mmụta nke bodhisattva Guanyin; na ụbọchị Yulanpen (nke a na -amakarị dị ka ememme mmụọ agụụ na -agụ) nke a na -enye ndị amụrụ ọhụrụ dị ka “mmụọ agụụ na -agụ” (ma ọ bụ, mmadụ nwere ike ịsị, mmụọ ọjọọ [gui 鬼]) na -eri nri ma kwusaa Dharma dị ka omume ọmịiko. N'oge ụbọchị ọmụmụ Buddha, ndị nkịtị na -akwụ n'ahịrị, ọtụtụ mgbe karịa elekere, ịwụsa mmiri n'elu obere ihe oyiyi nke nwa ọhụrụ Buddha dị ka ọrụ ngọzi na nkwanye ùgwù maka nnukwu onye nkuzi ọ ga -abụ.. [Foto dị n'aka nri] N'ụbọchị Yulanpen, ndị mọnk na -edu ndị nkịtị n'ime emume ogologo abalị a na -akpọ Feeding of the Flaming Mouths (fang yankou 放 焰 口), nke akpọrọ aha n'ihi na ekwenyere na, dịka ntaramahụhụ karmic, a na -amụgharị mmụọ. na ire ire ọkụ na akpịrị ha nke na -agbaze nri niile na -abata n'ọnụ ha tupu o nwee ike zụọ afọ ha; n'oge emume ahụ, ndị mọnk, site n'ike nke Dharma, nwere ike ịgbagọ ihe ọjọọ a, na -eme ememme ahụ naanị oge mmụọ ga -enweta nri. Ha na -anụkwa nkwusa nke Dharma nke nwere ike ibelata oge ha na hel. Ndị nkịtị nwere ike zụta mbadamba ihe ndị ọrụ afọ ofufo nke ụlọ nsọ na -arapara n'ahụ mgbidi dị n'ime ụlọ Yuantong ebe emume a na -eme. Na mbadamba nkume ndị ahụ ka edere aha ndị ha hụrụ n'anya nwụrụ anwụ, na -ahụ na, ọ bụrụ na a mụrụ ha ọzọ dị ka mmụọ agụụ na -agụ, a ga -akpọba aha ndị nna nna ha n'ime Ụlọ Nzukọ ka e wee nye ha nri ma kwusaara ha ozi ọma.
Na mgbakwunye na mgbakọ Dharma a na -enwe kwa oge, ndị mọnk ụlọ nsọ na -akpọkọta ofufe ụtụtụ (zaoke 早 课) na ofufe ofufe (wanke 晚 课) nke na -amalite ma na -akwụsị kwa ụbọchị. A na -eme ofufe ụtụtụ n'elekere 4:45 nke ụtụtụ ọ bụla yana ofufe mgbede n'elekere 3:45 nke ehihie. Ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị nkịtị na -esonyekwa n'ekpere, ọkachasị ndị mgbede.
Ndị na -efe ofufe na -emecha mmegharị nsọ nke ụlọ nsọ dị n'akụkụ etiti ya. Ha na -abanye n'ọnụ ụzọ ndịda, ha gafere n'ogige dị n'èzí, na -aga na Tianwang 天王 Hall, ebe ha na -achụrụ Buddha Maitreya (Mile Pusa future 菩萨) ọdịnihu na bodhisattva Skanda (Weituo pusa 韦驮 菩萨). Ha wee banye n'ogige dị n'ime na nnukwu ụlọ Mahavira nke ụlọ nsọ (Daxiong Baodian 大雄宝殿) ebe ha na -achụrụ Buddha nke alaeze atọ (Sanshi Fo 三世 佛) - Kaśyapa Buddha (Shijiaye Fo 是 迦叶 佛), Shakyamuni Buddha (Shijiamouni) Fo 释迦牟尼 佛), na Buddha na -elekọta Paradaịs nke Ebe Ọdịda Anyanwụ, Amitabha (Amituofo 阿弥陀佛). N'ikpeazụ, ha na -aga n'ogige ugwu nke emeghere ọha, ebe ha na -achụrụ Guanyin offerings, bodhisattva ọmịiko, onye onyonyo ya dị na Hall Yuantong 圆通.
Imeghe ụlọ nsọ ahụ ji nwayọọ nwayọọ mee ka ọ bụrụ ebe dị mkpa maka ndị bi na Beijing na -enwe olileanya ịchọpụta ihe okpukpe na Buddha bụ. Enweghị ego nnabata, ụlọ nsọ a ma ama dị ka ụlọ nsọ dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme, na nnukwu oghere a na -ejighị nke ukwuu nke ogige ụlọ nsọ ahụ mere ka ọ bụrụ ebe dị mma maka mkparịta ụka nke nkuzi Buddha na mmekọrịta ha na nsogbu nke oge a. Malite na 1990s, ọtụtụ akwụkwọ Buddhist na-akwụghị ụgwọ n'efu na kaseti na ndekọ vidiyo mechara dị na China China. Ngwa ihe mgbasa ozi ndị a nwere ọdịnaya. Ihe kacha baa ụba bụ mbipụta nke akwụkwọ nsọ Buddha a ma ama dịka Sutra nke Ndụ Ebighị Ebi (Wu Liang Shou Jing 无量寿经), nke na -akọwa Paradaịs nke Ebe Ọdịda Anyanwụ, na Lotus Sutra (Fahua Jing 法华经), nke na -eji usoro ilu iji kuziere ndị na -agụ ụzọ bodhisattva, ohere nke nzọpụta ụwa maka ihe niile dị ndụ, na ndụ enweghị nsọtụ nke Buddha. Ihe odide ndị ọzọ a ma ama bụ akwụkwọ omume ọma (shanshu 善 书), nke na -egosipụta akụkọ na -atọ ụtọ nke na -akụzi omume ziri ezi yana nsonaazụ karmic nke omume ọma na nke ọjọọ. Offọdụ n'ime akwụkwọ akparamagwa ndị a bụ mmegharị nke akwụkwọ omume ọma a ma ama site n'oge gara aga China dị ka Ndị na -ede akwụkwọ nke Merit na Demerit (Gongguoge 功过 格); ndị ọzọ, ka osi dị, ndị mọnk oge ochie ma ọ bụ ndị nkịtị dere ya na metụtara nkuzi karmic na ahụmịhe nke oge a. Okwu mmalite nke nkuzi Buddha, ọkachasị nke Nna-ukwu Jingkong written, onye mọnk Buddhist China a ma ama na Australia, gụkwara ebe niile. Mmadụ nwekwara ike ịchọta ederede thaumaturgical nke kwere ndị na -agụ ha nkwa ọgwụgwọ, ogologo ndụ na karma dị mma. Akwụkwọ na ọdịyo na vidiyo na okwuchukwu nke ndị mọnk a ma ama na ndị mmadụ gbasara ozizi Buddha na ndụ kwa ụbọchị bụkwa ihe a na -ahụkarị (Lee kwa, Fisher 2011).
N'ihi na ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa niile bụ otu n'ime ụlọ arụsị Buddha ole na ole na-arụ ọrụ mepere ọha na Beijing na mbido post Mao, ọ ghọrọ ebe dị mkpa maka nkesa ihe mgbasa ozi ndị a, omume nke wetara onye nyere onyinye uru. Ndị nwere mmasị na ihe ndị ahụ na -anọ mgbe ụfọdụ ka ha na ndị ọrụ ibe ha na -ekwu okwu n'ogige sara mbara nke ụlọ nsọ ahụ. N'ime ndị ọrụ ahụ, ụfọdụ ghọrọ ndị na-akpọ onwe ha ndị ọkachamara site n'ịgụ na ilele ihe, na ha ga-arụ ọrụ ya ;;;; okwuchukwu na -adịghị mma na ọdịnaya ha. [Foto dị n'aka nri] Ịnụrụ ndị nkuzi a na -amalite iji olu mkpali, nke etolitere elu na -agwa ndị na -ege ntị okwu, ndị na -ege ntị ndị ọzọ nọ nso ga -awagharị, na -achọsi ike ịmụta ihe ọ bụla ha nwere ike gbasara okpukpe a na -amabughị. Ọtụtụ n'ime “ndị nkwusa” a weere ọrụ otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ; ndị ọzọ, ka ọ dị, mepụtara usoro na -esochi mgbe niile na ọbụna pịnye ma kesaa nkọwa nke onwe ha nke ozizi Buddha (Lee kwa, Fisher 2014). Na mgbakwunye na okirikiri onye nkwusa na otu mkparịta ụka, otu ndị na -abụ abụ ma na -akpọ sutras na mbara èzí malitere ịkarị ihe dị ka mbido afọ 2010.
Ọdịdị nke ndị na -ekwusa okirikiri na ndị otu mkparịta ụka nwere ike nweela ihe ndị mere n'oge gara aga nke ụlọ nsọ. Akụkọ ihe mere eme nke ụlọ nsọ ahụ na -elekwasị anya na nhazi ya, akụ nke ọdịnala, omume nke ebe obibi ya, ma ọ bụ ndị ọbịa ama ama ya. Agbanyeghị, enwere akụkọ gbasara ndị mọnk na opekata mpe otu onye na -ekwusara ndị ọbịa ụlọ nsọ ozi na mmalite narị afọ nke iri abụọ (Pratt 1928: 36, Xu 2003: 28). Obi abụọ adịghị ya, mgbe ahụ ka ọ dị ugbu a, akụkọ ihe mere eme dị mkpa nke ụlọ nsọ dọtara ndị ọbịa dị ka ebe obibi nke ndị nkuzi mọnk dị mkpa bụ ndị ha tụrụ anya na ha ga -achọ nduzi na Dharma. Otú ọ dị, mgbe ha rutere n'ụlọ nsọ ahụ, ha chọpụtara na ọ naghị adịkarị mfe inwe ndị na -ege ntị na ndị nkuzi a ma ama na ndị ọrụ ibe ha ndị kọwara nkọwa nke ha ghọrọ ụzọ ọzọ mara mma. Agbanyeghị, ọ nwekwara ike bụrụ na ngalaba ọha nke ndị Buddha kere n'ogige ụlọ nsọ bụ n'oge ndụ ya kacha mma na 1990s na 2000s: N'oge Mgbanwe Ọdịbendị, e bibiri akụkụ Akwụkwọ Nsọ Buddha na nkuzi na omume ọha nke Buddha fọrọ nke nta ka ehichapụ, ọkachasị na obodo mepere emepe. Ndị bi na Beijing esorola na -emekọrịta ihe otu ọgbọ na echiche ụwa nke ekweghị na Chineke nke hụrụ Buddha na okpukpe ndị ọzọ dị ka ụgha na -emerụ ahụ. Ka ewepụrụ mmachibido na omume okpukpe site na 1980s, agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ nwere mmasị maka akụkụ a na -efu nke ihe nketa ha ma nwee mmasị inweta ozi ọ bụla ha nwere ike ịhụ na ebe egwuregwu dị ka ogige dị n'èzí nke ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa. Ọzọkwa, na ngwụcha narị afọ nke iri abụọ na mmalite narị afọ nke iri abụọ na otu, ọtụtụ ụmụ amaala China nwere nnukwu mfu na ndụ ha, ọkachasị ọgbọ nke bụ ndị ntorobịa n'oge mgbanwe ọdịbendị. Akpọkọtala ọtụtụ ọtụtụ dịka Red Guards, ọgbọ, gbagburu n'etiti narị afọ nke a na-anọchite anya ya nke ọma na otu ogige dị na mpụga. N'ịbụ onye mkpali echiche nke Mgbanwe Ọdịbendị na nkwenkwe na ha na-ewulite mmekọrịta ọha na eze, ọgbọ a chere na a gbahapụrụ ya mgbe steeti Mao tụgharịrị na ụzọ dị mma maka ọchịchị site na ngwụsị afọ ndị 1970. N'ịkwado ya na ọmịiko zuru ụwa ọnụ, ịha nhatanha, na mkpa omume omume kwa ụbọchị, Buddha nyere isi iyi nke pụtara na, maka ụfọdụ, mejupụta lacunae a.
N'oge ogo nke ewu ewu dị ka oghere okpukpe ọha, ogige ahụ nwere ihe ruru narị narị atọ sonyere na okirikiri ndị nkwusa ise na -arụ ọrụ n'otu oge. Ndị sonyere ga -abịarute n'elekere itoolu nke ụtụtụ ma ụfọdụ nọrọ ruo mgbe emechiri ụlọ nsọ n'elekere 300:9 nke ehihie ma ọ bụ n'elekere ise nke ise, ebe ihe ka n'ọnụ ọgụgụ bịara maka awa ole na ole mbụ mgbe ngwụcha Chati nke Sutras gasịrị. Ka ọ na-erule mbido afọ 4, ihe ahụ malitere ịdalata, na, ka ọ na-erule ngwụsị afọ iri ahụ, ọ ghọrọ ihe adịghị adị (Lee, Okwu/Esemokwu dị n'okpuru).
Kemgbe emepechara ụlọ nsọ ahụ, ndị mọnk na-arụkwa ọrụ dị ike na iweghachi okpukperechi Buddha, ọkachasị site na nkuzi nke nkuzi "nkuzi na akụkụ Akwụkwọ Nsọ" ugboro abụọ kwa izu maka oge abụọ nke ọtụtụ izu kwa afọ. N'adịghị ka Mgbakọ Dharma, nke na -ada n'ụbọchị dị iche iche n'izu na kalenda Ọdịda Anyanwụ, na -eme ka ọ sie ike ịbịa maka ndị nkịtị na usoro ọrụ izu ụka nkịtị, klaasị akwụkwọ nsọ na -eme na Satọde na Sọnde Sọnde, na -eme ka ha nwee ike ịnweta ohere sara mbara. nke ndị sonyere. Ndị mọnk dị iche iche na -akụzi klaasị ndị usoro nkuzi ha dịgasị iche iche: ụfọdụ na -akụzi naanị ebe ndị ọzọ na -agbalị itinye ndị na -ege ha ntị. Isiokwu maka klaasị ọ bụla ma ọ bụ oge klaasị dịkwa iche iche; semesters dị iche iche ma ọ bụ ọbụna klaasị dị iche iche nwere ike ọ gaghị ewulite ibe ha. Nnyocha agbụrụ m na -egosi na, dị ka klaasị akụkụ Akwụkwọ Nsọ n'ụlọ nsọ ndị ọzọ na China, mkpali nke ndị sonyere na -adịgasị iche. Ụfọdụ nwere mmasị na nghọta zuru oke nke ozizi Buddha iji nyere aka na omume nke ha; ndị ọzọ kwenyere na naanị site na ige ntị n'ozizi ahụ, ha ga -enweta uru na ọganiru ime mmụọ ọbụlagodi na ha aghọtachaghị ọdịnaya nke okwuchukwu n'ogo mmụta.
Ụlọ nsọ ahụ etinyekwala aka na ọrụ mgbasa ozi ebere, malitere na mmalite narị afọ nke iri na itoolu, n'oge usoro eze Qing, mgbe ndị mọnk ụlọ nsọ tinyere ihe egwu n'ihe egwu site n'ịchịkọta ozu ndị a gbahapụrụ n'ọgbọ agha ma na -emere ha ememe olili ozu (Naquin 2000: 650). N'oge mbido Republican (na mmalite narị afọ nke iri abụọ), nke ndị na -eme mgbanwe na steeti na n'ime ndị Buddha gbara ume, ndị Buddha malitere itinye aka n'ọrụ ebere. Ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa nwere ụlọ akwụkwọ ma nye ndị nọ na mkpa nri (Xu 2003: 27; Humphreys 1948: 106). N'ime oge dị ugbu a, ụlọ nsọ ahụ nyere ego maka mweghachi nke ụlọ akwụkwọ elementrị nke bibiri na ala ọma jijiji Sichuan 2008. Igbe onyinye maka ọgbakọ ọrụ ebere nke steeti na-ahụ maka Project Hope (Xiwang Gongcheng 希望 工程), nke na-enye akwụkwọ na mpaghara ndị na-enweghị ike na mba ahụ, na-anọ n'azụ nnukwu ụlọ Mahavira. Agbanyeghị, ụlọ nsọ nke oge a etinyechaghị aka na ọrụ ebere karịa ọtụtụ ụlọ arụsị Buddha ndị ọzọ na China, nke na-arụ ntọala ebere ha.
Nduzi nke saịtị okpukperechi, gụnyere ndị Buddha, na China komunist dị oke mgbagwoju anya (Lee, dịka ọmụmaatụ, Ashiwa na Wank 2006; Huang 2019; Nichols 2020). Ọ bụghị ụlọ arụsị niile dị ka saịtị okpukpe gọọmentị nyere ikike n'agbanyeghị na enwere onyonyo okpukpe, omume ofufe, ma ọ bụ ọbụna ndị ụkọchukwu bi. Ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa niile, dị ka isi ụlọ ọrụ nke otu ndị otu Buddhist nke China, bụ saịtị okpukpe edebanyere aha, mana ọ bụkwa ebe nchekwa ọdịbendị echekwara. Ọbụlagodi dị ka saịtị okpukperechi, ọ na -arụ ọrụ abụọ dị ka ụlọ nsọ na -eme ihe n'onwe ya, yana ndị mọnk bi na ya, yana ebe obibi nke ndị mọnk dị elu n'ime BAC, yana isi ụlọ ọrụ maka ọfịs Association. Ọ bụ ezie na ọrụ ụlọ nsọ kwa ụbọchị na -adabakarị na monastics bi na ya, ọtụtụ gọọmentị na ndị otu na -eme mkpebi dị mkpa gbasara akụrụngwa ma ọ bụ ọbụna ndị ọrụ.
Abbot (zhuchi 主持) na -eduzi ụlọ nsọ ahụ. Ọrụ ọzọ dị mkpa juputara na Ọbịa Onye Isi (zhike 知客) bụ onye na -ahụ maka mmekọrịta ụlọ nsọ na ụwa dị n'èzí. Ndị mọnk ndị ọzọ nwere emume emume, nhazi, na ndozi (Lee, Welch 1967). Dị ka ọ dị n'ụlọ nsọ Buddha niile dị na China nke oge a, ndị nkịtị na -arụkwa ọrụ dị mkpa na arụmọrụ kwa ụbọchị. Nke a bụ akụkụ n'ihi na enwere ndị mọnk pere mpe n'ihe metụtara ọnụ ọgụgụ na -arị elu nke ndị nkịtị na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọbịa ụlọ nsọ na -enweta kwa izu, ọkachasị n'oge mgbakọ Dharma. Ụlọ -nsọ na -ahazi ndị ọrụ afọ ofufo iri asaa kwa izu ka ha nwee usoro nhazi ọrụ. Ọrụ ha gụnyere isi nri, nhicha, ndozi na ndozi, ịhazi ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ n'oge mgbakọ Dharma, na ịhazi na ịchịkwa ndị ọbịa, ọkachasị n'oge mmemme emume. A maara ọrụ afọ ofufo ndị a dị ka "ichebe Dharma" (hufa 护法). Ha na -amasị ndị nkịtị dị ka isi iyi nke uru yana ohere imepụta obodo, ọkachasị ndị okenye, ndị ọrụ afọ ofufo lara ezumike nka bụ ndị mejupụtara ọtụtụ. N'oge dị iche iche, ụlọ nsọ ahụ ahazikwara ndị ọrụ afọ ofufo na-eto eto, ọtụtụ mgbe ụmụ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ kọleji, maka nnukwu ọgbakọ Dharma iji nyere aka na mmemme emume yana ịchịkwa igwe mmadụ. Ọrụ ndị ọrụ afọ ofufo ndị a na -eto eto (nke okwu yigong to zoro aka na ya) bụ akụkụ nke omume na -adịbeghị anya banyere ọrụ afọ ofufo obodo site n'ọgbọ amụrụ mgbe 1980 gasịrị. Ndị ọrụ afọ ofufo Yigong, ndị na -abụghị ndị nkịtị, na -enwekarị mkpali karịa site n'ịchọ ịnwale ihe ọhụrụ na izute ndị ọhụrụ karịa ohere iji nweta uru n'ime usoro mmụta okpukpe Buddha.
Tụkwasị na nke a, ụlọ nsọ nwere obere ndị ọrụ akwụ ụgwọ nke ndị na -arụ ọrụ n'ụlọ nsọ gụnyere ndị nchekwa na ndị na -arụzi ya.
Kemgbe ụwa, ụlọ arụsị Buddha dị na China agbasiwo mbọ ike n'etiti ihe ọha mmadụ ụwa na -achọ na ọrụ ha dị ka oghere okpukperechi. A na -anabata echiche nke ịkagbu mmadụ n'ụzọ dị mfe na ebe ọmụmụ Buddha nke India karịa na China. Okpukpe ndị Chaịna gbadoro ụkwụ na ezinaụlọ, na Buddha abụrụla ihe nwere ike ịkpaghasị ihe nlereanya okpukpere chi nke ezinụlọ. Okpukpe Buddha enwetawo mkpagbu n'ọtụtụ oge na ogologo akụkọ ihe mere eme ya na China, ebe mgbanwe ọdịbendị bụ naanị ihe atụ kachasị ọhụrụ. Agbanyeghị, ndị na -eme Buddha emebekwala ọha mmadụ China site na ime ememme maka ndị na -efe ofufe nkịtị, ịnakwere itinye buddha na bodhisattvas n'ime pantheon nke China, na ịnabata ụkpụrụ ndị China nwere oke mmasị dị ka nkwanye ùgwù maka ndị nna nna site na mmemme dị ka Nri nke Ọnụ Na -enwu enwu. Templelọ nke mgbapụta ụwa nke oge a na -egosipụta esemokwu ndị a ịbụ, n'otu aka, oghere maka ịlaghachi azụ nke ndị mọnk, oge ụfọdụ ihe ijuanya dị jụụ na ịdị jụụ n'ime obodo na -arụ ọrụ na, na nke ọzọ, oghere maka omume okpukpe a ma ama. Ọrụ nlekọta dị mkpa ya dị ka isi ụlọ ọrụ nke otu ndị otu Buddhist nke China na -egosipụta mkpa ọ dị ka Buddha ndị China bụrụ ndị nwere ọrụ ma na -anabata steeti na -ekweghị na Chineke nke ka na -enyo okpukpe enyo.
Ndị mọnk ole na ole na China taa ga -ekwusi ike na a ga -edobe ụlọ nsọ Buddha naanị dị ka oghere maka mgbapụta monastic na -enweghị ọrụ ọhaneze, na ọtụtụ (n'agbanyeghị na ọ bụghị ọtụtụ) na -etinye aka n'ịgakwuru ndị nkịtị na ọha. Agbanyeghị, enwere ahịrị ndị mọnk na ndị isi ụlọ nsọ ndị ọzọ chọrọ ka adọta ha, ọbụlagodi na ha anaghị enweta ụzọ ha oge niile. N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, n'ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa niile, ihe ka ukwuu na nke a metụtara ọrụ ndị okirikiri onye nkwusa na ndị otu mkparịta ụka n'ogige nke ụlọ nsọ ahụ.
N'ime ogologo oge nyocha nke agbụrụ m na ụlọ nsọ na mbido 2000, ndị mọnk ụlọ nsọ, ụmụ akwụkwọ ha nọtere aka, na, oge ụfọdụ, ndị isi nọ na Association kwupụtara nchegbu ha maka ọrụ ndị otu onye nkwusa na ndị otu mkparịta ụka, ọkachasị ndị a na -achịkwaghị achịkwa. nkesa ọtụtụ ihe mgbasa ozi n'ime ogige. Ndị ndú nke ụlọ nsọ a chere, n'ụzọ kwere nghọta, na ha, na ọ bụghị ndị nkwusa amateur na -enweghị asambodo okpukpe, nwere ikike na ibu ọrụ ikwu ihe bụ ozizi Buddha nke Ọtọdọks. Maka ebumnuche okpukpe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị isi ụlọ nsọ nwere nchegbu karịsịa na ọha na -amụta ịmata ọdịiche dị na nkuzi Buddha '' ezi '' site na nkwenkwe okpukpe ndị mmadụ ma ọ bụ, nke kadị mkpa, machibidoro nkuzi dịka nke mmụọ mmụọ Falun Gong, nke dabarala ọtụtụ ndị Buddha. akara na echiche. N'agbanyeghị ọtụtụ mmalite 2000s, ndị isi ụlọ nsọ ahụ enweghị ngwa nhazi iji chịkwaa otu ogige dị iche iche: enwere oghere onye ndu n'ụlọ nsọ, nke na -anọghị na abbot ruo ọtụtụ afọ, na enweghị mmasị sitere n'aka ndị ọrụ gọọmentị na -abụghị. ụlọ nsọ.
Site na nhọpụta nke abbot ọhụrụ, n'etiti afọ 2000 hụrụ nrịba ama na-aga n'ihu n'ogige ahụ na-adọ ndị mmadụ aka na ntị na ụlọ ọrụ ndị ọbịa nke ụlọ nsọ ga-ebu ụzọ nabata ihe okpukpere ekesa niile wee gbarụọ ihu na nkwusa ihu ọha na-enweghị ikike. Otú ọ dị, ruo ọtụtụ afọ, a na -elegharakarị ihe ịrịba ama dị ka ndị a anya, ọrụ ndị okirikiri onye nkwusa na ndị otu mkparịta ụka gara n'ihu dị ka ọ dị na mbụ. Ka ọ na-erule mbido afọ 2010, ụlọ nsọ ahụ rụsiri ọrụ ike iji weghara ohere ahụ: ọ dọbara ọtụtụ ụgbọ ala ebe ahụ wee malite idobe ụlọ ahịa iji ree ngwa ahịa Buddha. [Foto dị n'aka nri] Ịba ụba nke ogige na -eme ka mkpọtụ dị. N'ime otu nnukwu ọgbakọ Dharma m gara, otu n'ime ndị ọrụ afọ ofufo yigong mebiri okirikiri onye nkwusa nke na -egbochi naanị ọnụ ụzọ ogige dị n'ime, na -ebute egwuregwu iti mkpu n'etiti onye ọrụ afọ ofufo na onye ụkọchukwu. Maka onye nkwusa ahụ, onye mụrụla nkuzi Buddha n'onwe ya ọtụtụ afọ wee kwusaa ozi ọma ya na ndị na -ege ntị nwere mmasị kwa izu, onye na -eto eto nke nwere ike ọ maghị obere ihe banyere Buddha bụ ihe ihere. Otú ọ dị, onye ọrụ afọ ofufo ahụ kwenyere na e nyela ya ọrụ dị mkpa nke ịhụ na ndị mmadụ nwere ike ịga nke ọma n'etiti ememme ndị mọnk ụlọ nsọ haziri, bụ ndị ikike onye ụkọchukwu na -anwa ịnara n'ike.
Ka ọ na-erule etiti afọ 2010, n'okpuru onye isi Xi Jinping, ndị isi ụlọ nsọ ahụ nwetara nkwado site n'aka ndị ọchịchị na-abụghị ndị ọzọ iji chịkwaa oghere nke ha wee nwekwuo ike n'ịmanye ndị nkwusa ka ha kwụsị okwuchukwu ha a na-edeghị ede. Ha na-ekesa nkesa akwụkwọ ndị Buddha na ihe mgbasa ozi dị iche iche n'otu tebụl n'ime ogige dị n'ime nke ndị ọrụ afọ ofufo nkịtị lere anya.
N'agbanyeghi nke a, ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa ka bụ ebe okpukperechi dị egwu maka ndị mọnk na ndị nkịtị, yana mmemme emume na -arụ ọrụ, ịga n'ihu klaasị akụkụ Akwụkwọ Nsọ, yana ịga n'ihu na -enwe ọtụtụ ụdị ihe Buddha n'efu ịgụ na ịhụ. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ ezie na ndị ụkọchukwu nkịtị enweghị ike ịga n'ihu na -eme nkwusa, ụfọdụ ewerela ihe na -eso ha ebe ọzọ; ndị ọzọ na -anọrọ n'ụlọ nsọ isonye na mmemme. Ndị na -arụ ọrụ ogologo oge ka na -achọ ndụmọdụ ha, n'agbanyeghị na ha nwere ezi uche, na -enyekwa ndị ọzọ aka ime ya. Ọtụtụ ndị na -eme ahụ, ọkachasị ndị agadi, na -aga n'ihu na -ezukọ n'ogige dị n'ime na n'èzí ka ha na -akpakọrịta, na -atụle akụkụ Akwụkwọ Nsọ Buddha, na -enweta ahụ efe site na okpomọkụ n'oge ọnwa ọkọchị. Na mkpokọta, ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa niile bụ ngosipụta siri ike nke arịrịọ Buddha ọbụlagodi n'otu n'ime obodo ndị kacha nwee ego n'ụwa niile.
Image #1: Ememe ntụgharị ntụgharị na ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa.
Foto #2: Ememe ncheta ọmụmụ Buddha n'ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa.
Foto #3: Okwuchukwu na -adịghị mma na ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa.
Foto #4: A na-edobe ụlọ ahịa iji ree ngwa ahịa Buddha na ụlọ nsọ nke nnapụta ụwa.
Foto #5: Ihe ndị Buddha na-akwụghị ụgwọ ka ị gụọ ma lelee nke ndị mmadụ nyere dị ka ọrụ ịme ihe.
Ashiwa, Yoshiko na David L. Wank. 2006. "Ndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ụlọ nsọ Buddhist na -etolite etolite: Steeti, Mkpakọrịta, na Okpukpe na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ China." Akwụkwọ akụkọ nke Asia Studies 65: 337-60.
Fisher, Gareth. 2014. Site na ndị ọrụ ibe ruo Bodhisattvas: Omume Omume nke Omume Buddhist Lay na Contemporary China. Honolulu: Mahadum nke Hawai`i Press.
Fisher, Gareth. 2011. "Ederede Omume na Ọganihu nke Ụkpụrụ Buddha na China." Pp. 53-80 sentimita asatọ Okpukpe dị na China nke oge a: ọdịnala na ihe ọhụrụ, nke Adam Yuet Chau deziri. New York: Routledge.
Gildow, Douglas M. 2014. "Ubi Ritual Buddha nke China: Ọha na -eme ọha na eze na ebe obibi ndị mọnk PRC taa." Akwụkwọ akụkọ nke ọmụmụ Buddha ndị China 27: 59-127.
Huang Weishan. 2019. "Imezigharị obodo na ụlọ ọrụ ụlọ nsọ - ọmụmụ ihe gbasara ụlọ nsọ Jing'an." Pp. 251-70 na Okpukpe Buddha mgbe Mao: Mkparịta ụka, aga n'ihu, na ntinye, nke Ji Zhe, Gareth Fisher, na André Laliberté deziri. Honolulu: Mahadum Hawai'i Press.
Humphreys, ekeresimesi. 1948. Site na Tokyo. New York: Hutchison na Co.
Li Yao 李 瑶 na Madelyn Bjork. 2020. “Ụlọ nsọ Guangji.” Pp. 92-105 na Okpukpe Beijing, nke Ị Bin na Timothy Knepper deziri. New York: Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Bloomsbury.
Naquin, Susan. 2000. Peking: Ụlọ nsọ na ndụ obodo, 1400-1900. Berkeley: Mahadum California Press.
Nichols, Brian J. 2020. "Ịjụ ajụjụ njem nlegharị anya n'okpukpe na ebe obibi ndị mọnk Buddha na China." Pp. 183-205 sentimita Njem nlegharị anya Buddha na Eshia, Ndị Courtney Bruntz na Brooke Schedneck dere. Honolulu: Mahadum Hawai'i Press.
Pratt, James Bissett. 1928. Njem njem nke Buddha na njem nsọ Buddha. New York: Macmillan Pịa.
Daalụ, Holmes. 1967. Omume nke Buddha Buddha, 1900-1950. Cambridge: Mahadum Harvard University.
Xu Wei 徐 威. 2003. Guangji si . Beijing: Huawen Chubanshe.